WAA MAXAY SABABTA CALEEMAHA U DAADINAYAAN OO AY QALALAN YIHIIN DRACAENA, KHALADAADKA UGU WEYN EE DARYEELKA DHIRTA - DHIRTA GUDAHA
Dracaena: sababaha huruudka iyo caleen-dhac
Hooyo ee Dracaena qalaad ayaa ah Afrika. Qurxinta, ubax la mid ah ubax ayaa muddo dheer loo doortay beeraha ubax beerista guriga.
Warshadu waa quruxsan tahay mana ahan mid madaxbannaan, laakiin mararka qaarkood waxay bilaabaan inay beerashada ubaxu ku yeeshaan dhibaatooyin. Aan u fiirsanno si faahfaahsan dhammaan sababaha macquulka ah ee dracaena u noqotaa huruud iyo lumiso caleemo.
Waa maxay sababta caleemaha dracaena u noqdaan huruud iyo hoos u dhacaan
Waxaa jira dhowr sababood oo ah qaababka si ay u noqdaan caleemo jaalle ah oo qallalan. Sababta dabiiciga ah ee huruuda waa da'da geedka, caleemaha dracaena waxay ku nool yihiin qiyaastii labo sano, ka dibna, ka bilaabashada talooyinka, waxay noqdaan huruud. Haddii caleemaha geedo yar yar ay huruud noqdaan ama qallalan yihiin, waxaad u baahan tahay inaad raadiso sababta.
Xukunka aasaasiga ah ee waraabinta dhirta - ha buuxin, carrada u dhexeeya waraabinta waa in la qalajiyaa. Xilliga xagaaga, dhirta waxaa la waraabiyaa laba illaa afar jeer toddobaadkii, xilliga qaboobaha - aan ka badnayn laba jeer. Xilliga xagaaga, lakabka ugu sareeya ee ciidda waa in la qalajiyo si fiican, ee xilliga qaboobaha - qalajinta dhamaystiran, hubi leh ul dhuuban.
Laga soo bilaabo qoyaan xad-dhaaf ah, nidaamka xididku wuxuu bilaabmaa inuu kallanaayo, iyo dracaena waxay noqotaa jaale ah oo dhogorta. Marka waraabiyo, waa suurad wacan in la isticmaalo biyo kala gooni ah, iyo ka dib si ay u daboosho carrada loogu talagalay ogsijiinka si xididada.
Waa muhiim! Haddii qolka dharaartu ku yaalo qulqulatada badanaa waxay keentaa hawo qallalan, waxay warshad ku dhejisaa qubeys diirran. Inta lagu guda jiro howsha, ku rid bac caag ah dheriga si ay ciidda u daboosho biyaha, haddii kale waa la maydhin karaa.
In aan la raacin heerkulka iyo qoyaanka
Qaar badan oo jecel ubucda ubaxa waxay sameeyaan qalad markii la doorto meel loogu talagalay. Inkastoo xaqiiqda ah in martiqaadku uu ka yimaado Afrika kulul, hawada qalalan ayaa ka horjeeda iyada. Marnaba ha ahaato dheriga dhirta la dhigo meel u dhow qalabka kulaylka. Tani waxay noqoneysaa sababta ugu weyn ee keenta dracaena inay huruud noqoto oo dhacdo.
Heerkulka ku habboon ee loo yaqaan 'drayseny' - laga bilaabo 18 ilaa 25 darajo. Marka heerkulku hooseeyo, waxay jiri kartaa jirro. Dracaena waxay jeceshahay iftiin jilicsan, jilicsan, xilliga jiilaalka waxay u baahan tahay inay bixiso iftiin dheeraad ah.
Qoyaanka qolka dhirta ku yaal, waa in lagu hayaa heer ku filan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa buufin, qubeys diirran leh biyo qol.
Qubeyska, marka laga reebo casriyeynta, waxay ku dhaqi doonaan boodhka caleenta, laakiin ka hor inta aan la geynin dhirta meel ka dib qubeyska, iska hubi in aysan jirin biyo u dhexeeya caleemaha - duufaanka jaalaha ah sababahan darteed.
Nafaqada dhirta oo aan ku filnayn
Inta lagu jiro muddada koritaanka, dhirta waxay ubaahantahay nitrogen. Dukaamada ubaxa waxaa jira walxo ku haboon ubaxyo caleenta leh oo leh waxyaabo sarreeya oo ka mid ah walxahan. Ku dar daroogada biyaha markaad waraabiso muddada u dhaxaysa Maarso ilaa Agoosto.
Inta lagu jiro xilliga koritaanka, qaabka isku dhafan ee geedka ayaa si fiican u saameeya: ammonium sulphate (0.3 g), nitricium nitrous (0.5 g), phosphate potassium (0.4 g). Qaybaha waa isku dhafan oo lagu qasi karaa litir biyo ah. Xalkani waa mid waxtar leh marka la buufinayo.
Waxaa laga helaa dukaamada bacriminta qaabka ulaha, mid ka mid ah noocaas oo kale waa ku filan muddo dheer. Waa in lagu xoqo si toos ah ciidda iyo in muddo ahna iloobo dharka.
Cunto cagaaran oo cagaar ah oo dhirta ah, afartii iyo afartii maalmoodba mar, adeegso xalka nitroammofoski ama fiyuusyada dabiiciga ah. Dharka ugu sareeya ee ka hortagaya mugdiga ah ee talooyinka caleemaha, - daroogo "Master" ama "Stimulus", waxay sameeyaan afartan iyo toban maalmood.
Xilliga jiilaalka, marka heerkulka hawada ee qolka uu yahay 16-20 digrii, bacarimid waa la dhimayaa hal mar bishii. Isla mar ahaan bacriminta kaliya ciidda, quudinta foliar aan loo isticmaalin.
Digniin! Haddii dhirtaagu sii korodho ciidda isla muddada afartan sanno, haddana maaha mid la yaab leh in dhirta caleenta caleemaha ay noqoto jaale iyo qalalan, iyo kuwa cusubi ma koraan. Waqti ka dib, cusbada waxay ku urursan yihiin dhulka, ka hortagga walxo iyo waxyaallaha waxtar leh ee gaaraaya ubaxa. Warshadu waxay u baahan tahay in lagu beeray substrate cusub.
Maxay caleemaha u muuqdaan caleemo
Dhibcaha caleemaha dhirta waxay sheegi karaan daryeelka aan habooneyn ama caabuqa cudurada.
Ma taqaanaa? Qabiilada Afrika waxay leeyihiin halyeey ku saabsan muuqaalka muuqaalka. Waqtiyadii hore waxaa ku noolaa masduul la dilay maroodi, oo dhiigooda ku quudiya. Marka maroodiga maroodiga ah uu ku biiray dagaalka, masduulaagii wuxuu ku dhacay duufaan wuxuuna ku dhuftay culayskiisa. Meesha meesha dhiigga laba xayawaanka isku qasan, dracaena koray. Sonkorta qabta, ama caleemaha, waxaa loo yaqaannaa dhiigga masduulka.
Galka qorraxda tooska ah
Dhibco jaale ah oo ku salaysan dracaanum - Tani waa cadceeda, waxay u muuqataa haddii dhirtaadu ku jirto qorraxda tooska ah. Qaadashada dheriga balakoonka ama loggia ee xilliga diiran, ha iloobin in ay u suurtagaliso.
Calaamadaha iftiinka dhalaalaya ayaa ah midabka cirridka caleemaha iyo qalajinta talooyinka saxanka caleenka. Xilliga xagaaga, dracaemiyadu waxay inta badan u baahan tahay in laga saaro meelo kulul, kuleylka ayaa sidoo kale saameynaya xaaladda guud ee geedka.
Dracaena waxay u nugul tahay cudurada iyo cayayaanka. Kallor bakteeriyada caleemaha ayaa la saameeyaa, iyo qoyaan badan iyo waraabin joogto ah ayaa gacan ka geysta faafitaanka cudurka.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo badbaadiyo dracaena, haddii caleemuhu huruud noqdaan oo qalalan yihiin xanuunka. First of dhan, ee ka hortagga, ku dar fosfooraska iyo potassium bacriminta. In la yareeyo daaweynta cayayaanka iyo daaweynta cayayaanka ayaa kaa caawin doona la dagaallanka cudurrada.
Haddii aad ka shakisan tahay in weerarka dulin (thrips, caarada caarada ama shchitovki), ka saar daawada dracaena laga soo qaado marinka kale si looga fogaado infekshanka. Cayayaanka noocan oo kale ah ayaa ka caawin doona la dagaallanka cayayaanka: Iskra, Promonal iyo Aktellik.
Goobta dracaena ee qabyada
Dhibcood oo dhoobo madow ku saabsan barafka dracaena. Warshadu ma jecla dhibco heerkulka iyo diyaarinta. Laguma talin in dheriga loo galo windowsill leh fur furan ee hawada. Hawada cusub ayaa fiican, laakiin isbedel deg-deg ah ee heerkulka, talooyinka caleemaha waxaa lagu daboolayaa dhibco bunni ah.
Xaqiiji in daaqadaha ay leeyihiin boorso fiican, badanaaba bacaha casriga casri ah oo leh dabayl xooggan u diyaari hawo qabow. Caleenta barafeysan waxaa lagu badbaadin karaa biyo diirran.
Waa maxay sababta daawada dracaena ay dib u dhacdo ka dib?
Warshadu kama dheeraan karto ciidda isku midka ah. Xulashada ugu wanaagsan ee horumarinta wanaagsan waxay noqon kartaa mid laba sano ama saddex sano ah. Badanaa, geedka ayaa bilaabay inuu qalalo ka dib markii la beddelo dheriga, waxay muujineysaa in habka si qaldan loo sameeyey, waxaa laga yaabaa in la qaado ciqaabta aan habboonayn ama nidaamka xididaha waxyeellada leh.
Aynu ogaanno sida si habboon loo fuliyo habka dhirta transplanting. Si aan u waxyeeleynin xididada daawada dracaena, oo lagu beddelay habka isugeynta. Waxaa fiican in la doorto ciidda dhirta timirta ah, waxaa wanaagsan in lagu daro ciid iyo dhuxusha. Xusuusnow, ciidda for dracaena waa inay ahaato iftiin, dabacsan oo aan lahayn dhanaan.
Qiyaastii laba toddobaad ka dib marka la isu tallaalo, dracaena waxay u habeysaa xaalado cusub, caleemuhuna waxay noqon karaan huruud. Si loo caawiyo dhirta soo kabsashada, ku buufin birta cusub ee eepine ama birta kuleylka ah.
Marar badan, dracaena ayaa ku koray biyaha, laakinse muddo dheer ku sugnayd deegaanka biyaha ee u dhow dracaena, jirriddu waxay noqotaa huruud. Maaddooyinka macdanta waxaa lagu shubaa derbiyada weelka, kuwaas oo farageliya horumarinta haboon ee warshadda, marka lagu daro, deegaan biyuhu waxay u fiicanyihiin horumarinta bakteeriyada. Dragonza qallafsan ee ciidda, fiiro gaar ah iyo daryeel ayaa ka caawin doonta iyada dib u soo kabashada.
Xiiso leh Dracaena rein - "dhiigga masduulka" waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro nadiifinta dharka maadada birta, rinjiyeynta dharka. Maaddada kondhomolojiyada, timaha timaha ee leh shinni dahab ah oo dahab ah ayaa la soo saaraa. Cabitaanka Dracaena waxaa loo isticmaalaa sida walxo cayriin ah daroogooyinka qaarkood iyo dheeh cabitaan khamri ah.
Mulkiilayaal badan oo xayawaan ah ayaa la yaab leh oo ku saabsan maskax ku jira maskaxda. Waxaa la ogaaday in bisadaha ay jecel yihiin inay calaliyaan caleemaha geedka. Si aad uga welwesho tani ma aha mid u qalantaa - wax dhib ah ma laha xoolaha ama dadka. Geedka geedka timirta ah wuxuu noqon doonaa quruxda qalaad ee gurigaaga.